Toa ireo mpamokatra sarimihetsika maoderina, izay tsy mitovy amin'ireo mpiara-miasa aminy tamin'ny taon-jato farany, dia nahitana ny teknolojia farany indrindra tamin'ny famoronana sariitatra sarimihetsika.
Saingy, indrisy fa - na dia ny fiantraikany manokana sy ny grafika amin'ny ordinatera aza dia tsy nanampy azy ireo hisoroka ireo sarimihetsika sarimihetsika ao amin'ny frame, izay hita amin'ny maso tsy mitongilana. Ary raha ny marina dia ny sasany tamin'izy ireo aza no nanolotra ny loka mainty loka!
1. "Klioban'ny klioban'ny Dallas"
Ohatra, ny tantaran'ny tale jeneraly Jean-Marc Valle, izay ny hetsika dia mamerina ny zava-nitranga tamin'ny taona 1985. Ary ho an'iza amin'iny no manantona ny ambangovangony amin'i Ron Woodruff (Matthew McConaughey) ny afisy Lamborghini Aventador, izay tsy navoakany hatramin'ny 2011! Saingy ilay sarimihetsika dia manana "Oscars" telo, roa "Globe Golden" ary statuettes maromaro roa.
2. "Fiction hohozona"
Eritrereto, tsarovy ity sarin'i Quentin Tarantino ity, tsy miresaka velively momba izany isika raha tsy misy "legend" na "cult". Ary ahoana, ahoana no ahafahan'i Quentin manaiky fa mety hipoitra tampoka ny banga eny amin'ny rindrina na dia efa nisy feo aza?
3. "Pirates of the Caribbean"
Eny ary, jereo tsara ... Tsy mahamarika na inona na inona ianao?
Avy eo inona ao anatin'ilay saribakoly miaraka amin'ny piraty manao ombilahy iray ao anaty solomaso maivana?
Oh, ary ny kapiteny Jack Sparrow tenany dia tsy manohitra ny manao ny akanjon'ilay marika lamaody!
4. "Avaratra manerana ny avaratra-andrefana"
Toa efa im-roambinifolo imbetsaka ny sary malaza tao amin'ny Cafe Mountmore cafe, raha efa nanakatona ny sofiny ilay zazalahy, fantany fa ho avy tsy ho ela ilay jiro?
Ary ahoana no tianao tahaka an'io fiara fotsy izay niseho tao amin'ny toeram-piadiana io tamin'ny taona 1280?
6. Ny Gladiatera
Moa ve ny Fanjakana Romanina efa manana biriky entona, ary ny kalesiny mihitsy aza? Saingy nahazo loka 5 "Oscars" ilay horonantsary, iray amin'ny lafiny mahomby indrindra amin'ny fahitana!
Diniho fotsiny ny fomba hiverenan'ny croissant amin'ny tànan'i Vivian Ward (Julia Roberts) ho lasa ...
8. Ny "Hobbit" ary "Ny Tompon'ny ririnina"
Rehefa mitifitra trilogie ianao, tsaroanao ve ny karazana maso nananan'ny olona voalohany?
Fijerena ny fakantsary ao amin'ny fitaratra ny milina? Roa mankany amin'ny tale ho an'ny tsy fanekena!
Fa ahoana kosa ny ataon'ny ankizy roa avy amin'ny ratona telo!
11. Ny Avengers
Mbola tsy mino ve ny fahagagana? Avy eo, jereo - aloha, ny akanjo fanadiovana ny kapiteny Amerikana taorian'ny ady niaraka tamin'i Chitauri, ary avy eo ...
... ary avy eo ny bumper the fiara, aorian'ny pogroms ao amin'ny Torah!
12. Ny Matrix
Eny, ohatrinona no azonao atao - indray ny fandinihana ny fakantsary, ary na dia eo am-baravarana aza?
13. Ny X-Men
Vitsy ny manisa ny famokarana sarimihetsika rehetra amin'ity sarimihetsika ity!
Maro ny majika tsy mitranga, hoy ianao? Eny, nijery imbetsaka ny tovolahy mpanamboninahitra iray nanjavona teo amin'ny handrina ary nisy maratra malaza niseho tamin'ny endrika tselatra, noheverinay koa izany.
Ary ahoana ny amin'ilay sotro, izay zaraina roa isa roa, ary avy eo amin'ny ampahany kely?
Niaraka tamin'ireo batteries teo ambany akanjo, Harry sy Hermione ihany koa, dia tsy nitodika tamin'ny fomba mahomby ...
Ary i Sofia Coppola dia mbola hipster, "mametraka" ao anaty bobongolo ny tennis-n'ny Marie Antoinette!
Ary ahoana ny fomba hialana amin'izany?
Manontany tena aho hoe firy amin'ny sarimihetsika dia misy sary avy amin'i Rose, satria avy amin'i Brock azo antoka dia mahazo ny iray monja i Jack!
Ohatra mampihomehy momba ny lojika sariitatra, izay hahatonga ireo olon-dehibe hihomehezana!
25 rakitsoratra hafahafa, izay tsy tokony haverina
19 sary, izay mampiseho zavatra manokana
26 sary vetaveta mampatahotra
18 tantara manaitra izay nitranga tao amin'ny fampakaram-bady
Izay mpilalao no mahita rehefa eo ambony sehatra
Ilay lehilahy lehibe dia nanao tolotra ho an'ny zazavavy 5 taona!
Zazavavy reny: "fanamafisana" ny sary experiment!
Ny fitiavana mandrakizay dia tsy amin'ny nofy fotsiny: 70 taona miaraka!
TOP 15 zava-misy momba ny famonoan-tena, izay tianao hiantsoantso, avy eo dia mihomehy
Fotoana hieritreretana: 15 asa tsotra izay tsy azon'ny olon-dehibe atao
Fihetseham-po: Sarin'ireo saripika 20 an'ny "Titanic" ankehitriny!
Nahatonga fientanam-po tamin'ny tambajotra sosialy ireo sary 40 ireo!
Toetry ny otitis tao amin'ny zaza
Afaka manimba an'i Leo DiCaprio ny "Wolf from Wall Street"!
Aky ny lakozia Acrylic
Divination amin'ny tanana amin'ny ankizy
Fiambenana ny ratsy
Nahoana no latsaka ny nify lian-drà?
Dorada ao anaty lafaoro
Modely modely 2014
Nianjera ilay zaza ary nokapohiny ny lohany
Aretina varikose mandritra ny fitondrana vohoka
Bibikely siramamy ho an'ny ririnina - mahasalama mahasalama ny fikarakarana sakafo ao an-trano
Ahoana ny fomba hanasana ny mikraoba?
Ahoana ny fomba hahatonga azy ho vegetarianina?
Fandraisan'anjara amin'ny aterineto
Oatcake avy amin'i Hercules - recipe
Ho any am-ponja i Mark Sulling noho ny fananan'izy ireo sary vetaveta
Ny dikanteny nofinofy dia zazakely ary ahoana no fomba handikana izany nofy izany?